Fanamoriana mofomamy amin'ny bokotra miaraka amin'ny Tummy Fanaraha-maso sy ny Fividianana - China Butt lifewearear miaraka amin'ny Tummy Control Manufacturers
Ny fividianana entana mivarotra mivantana dia mitondra fehin-tsorokely mihetsiketsika fatratra ny vehivavy mandehandeha
Akanjo fehin-kibo fatratra vita amin'ny vavony sy ny andilany raha misy olona tonga lafatra. Ny valahany dia afaka miforitra, tsy misaron-tava, maivana ary marefo, mahazo aina sy mifofofofo. Namboarina vita amin'ny 95% landihazo + 5% spandex, malefaka ary marefo, sekely tsy misy sela.
Vidim-bidy Amazon dia lehibe habe Tsy hita maso ny endrika amam-behivavy tsy misaron-doha amin'ny fibaikoana Tummy Control Slimmer Women High waist Butt Lifter Body Shaper
Pataloha fehikibo miendrika kiraro, fisaka avo roa sosona misy randrana eo amin'ny valahany sy ny kibony. Ny bokotra dia mameno ny andilany sy mamolavola azy ireo. Akan-kady izay mampihena ny tavy amin'ny tongotra. Fonon-dàlana Double, fanamafisana kalitao.